ဗိုကျခှဲမှေးပွီးလြှငျ ဆောငျရနျ ရှောငျရနျမြား
ကိုးလလှယျ ဆယျလဖှားအပွီး မိခငျမြားအတှကျတော့ ကလေးတဈယောကျမီးဖှားပွီးခြိနျဟာ စိတျလှုပျရှားစရာအကောငျးဆုံး အခြိနျပါပဲ ။
မီးဖှားရာမှာ ဗိုကျခှဲမှေးထားရတဲ့ မိခငျမြားဟာ ရိုးရိုးမှေးထားတဲ့ မိခငျမြားထကျ အနားယူရနျ အမြားကွီး လိုအပျပါတယျ ။ သို့အတှကျ ဗိုကျခှဲမှေးဖှားရသော မိခငျမြားအတှကျ ဆောငျရနျ ရှောငျရနျ အခကျြမြားကို တငျပွလိုကျရပါတယျ ။
၁ ။ အနားကောငျးကောငျးယူပါ
ဗိုကျခှဲမှေးခွငျးဟာ အကွီးစား ခှဲစိတျမှုတဈခုဖွဈပါတယျ ။ အဲ့အတှကျ တခွား ခှဲစိတျမှုမြားကဲ့သို့ လုံလောကျသော အနားယူမှု လိုကိုလိုအပျပါတယျ ။ ဗိုကျခှဲမှေးဖှားပွီး နောကျဆကျတှဲ ပွသနာ တဈစုံတဈရာမရှိပါက ဆေးရုံတှငျ သုံးလေးရကျခနျ့နပွေီး အိမျတှငျ ခွောကျပတျလောကျ အထိ အနာကကျြစရေနျ အနားယူရပါမယျ ။
ဒါဟာ အပွောလှယျသလောကျ အလုပျခကျပါတယျ ။ သငျအလှနျပငျပနျးအနားယူခငျြပမေယျ့ သငျ့ဆီက နှေးထှေးမှု သငျ့ရဲ့ ဂရုစိုကျ နို့ခြိုတိုကျကြှေးမှုကို အမွဲတစေ တောငျးဆိုနမေယျ့ ကလေးငယျကွောငျ့ မလှယျပါဘူး ။ ဒါကွောငျ့ ကလေးအိပျနခြေိနျမှာ လိုကျအနားယူပါ ။ မိသားစုကို ကလေးသေးခံလဲခွငျးလိုမြိုးမှသညျ တခွားဝယြောဝစ်စအလုပျတှမေယျ ကူညီစပွေီး ရနိုငျသလောကျ အနားယူခွငျးဖွငျ့ အဆငျပွအေောငျ လုပျဆောငျနိုငျပါတယျ ။
၂ ။ မိမိခန်ဓာကိုယျကို ဂရုစိုကျခွငျး
အနားယူစဉျ မိမိကိုယျကို အထူးဂရုစိုကျပါ ။ လှကေား အဆငျးအတကျလုပျခွငျးမြား တတျနိုငျသရှေ့ ရှောငျကဉျြပါ ။
ကလေးခြီခွငျးမှ အပ တခွားအလေးအပငျပစ်စညျးမြား မခွငျး ရှခွေ့ငျးမြားကို ရှောငျကွဉျပါ ။
နှာခတြေိုငျး ခြောငျးဆိုးတိုငျး ဗိုကျမှ ခှဲထားသညျ့နရောကို ဖိပေးပါ ။
လုံးဝ လူကောငျးပကတိအတိုငျးဖွဈစရေနျ ရှဈပတျတာကာလအထိ အခြိနျယူရနိုငျသညျ့အတှကျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခွငျး ၊ အလုပျခှငျပွနျဆငျးခွငျး ၊ ကားမောငျးခွငျးတို့ကို လုပျဆောငျရနျ သငျ့မသငျ့ ဆရာဝနျနှငျ့ပွသတိုငျပငျရနျ လိုအပျပါတယျ ။
ပွငျးထနျတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးမြိုးကိုရှောငျရှားသငျ့ပွီး လမျးလြှောကျပေးခွငျးမြိုးသာ လုပျဆောငျသငျ့ပါတယျ ။ ထို့အပွငျ ဝမျးခြုပျခွငျးကို ကာကှယျရနျ ရမြေားမြားသောကျပေးရနျ လိုအပျပါတယျ ။
ခှဲစိတျဒဏျရာမှ နာသောအခါတှငျလဲ မိမိသဘောဖွငျ့ အနာသကျသာဆေးမြား မသောကျသငျ့ဘဲ သကျဆိုငျရာ ဆရာဝနျဖွငျ့ တိုငျပငျသငျ့ပါတယျ ။
အထူးသဖွငျ့ နို့တိုကျ မိခငျမြားတှငျ ရငျသှေးအား ထိခိုကျစနေိုငျသောကွောငျ့ မညျသညျ့ဆေးမှ အလှယျတကူ မသောကျသငျ့ မလိမျးသငျ့ဘဲ အထူးဂရုစိုကျသငျ့ပါတယျ ။
၃ ။ အာဟာရမြှတအောငျ စားသောကျပေးခွငျး
လုံလောကျပွီး မြှတသော အာဟာရဟာ ဗိုကျခှဲမှေးပွီးစ မိခငျတဈဦးအတှကျ အနာမွနျမွနျ ကကျြရနျ ၊ ပုံမှနျအနအေထား အမွနျဆုံးရောကျရနျ အဓိကအခကျြပဲဖွဈပါတယျ ။
နို့တိုကျမိခငျတဈဦးအနနေဲ့ ကောငျးမှနျတဲ့ အာဟာရမြား အစားအစာမြားကို စားသုံးပေးမှသာလြှငျလဲ မိမိကလေးကနျြးမာ ဖှံ့ဖွိုးစရေနျ အထောကျအကူရရှိစမှောပဲ ဖွဈပါတယျ ။
ထို့အပွငျ ရေ ၊ အရညျအမြိုးမြိုးကို အမြားအပွားသောကျပေးခွငျးဟာ နို့ထှကျရာတှငျ အထောကျအကူဖွဈစနေိုငျပါတယျ ။
ဘယျအခြိနျ ဆရာဝနျဆီ အမွနျဆုံးပွနျလညျပွသ သငျ့သလဲ ?
* ခှဲစိတျထားသော ခြုပျရိုးတဈလြှောကျ နီရဲပွီး ယောငျကိုငျးနမေယျ ၊ ပွညျတှထှေကျနမေယျ
* မိနျးမကိုယျကနေ အနံ့ဆိုးတှနေဲ့ အရညျတှေ ဆငျးမယျ
* ရငျဘတျအောငျ့ အသကျရှူရခကျခဲမယျ
အစရှိသညျတို့ ဖွဈပှားလြှငျ ဆရာဝနျနှငျ့ အမွနျဆုံးပွနျလညျပွသရနျ လိုအပျပါတယျ ။
ဗိုက်ခွဲမွေးပြီးလျှင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ
ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွားအပြီး မိခင်များအတွက်တော့ ကလေးတစ်ယောက်မီးဖွားပြီးချိန်ဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံး အချိန်ပါပဲ ။
မီးဖွားရာမှာ ဗိုက်ခွဲမွေးထားရတဲ့ မိခင်များဟာ ရိုးရိုးမွေးထားတဲ့ မိခင်များထက် အနားယူရန် အများကြီး လိုအပ်ပါတယ် ။ သို့အတွက် ဗိုက်ခွဲမွေးဖွားရသော မိခင်များအတွက် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်များကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ် ။
၁ ။ အနားကောင်းကောင်းယူပါ
ဗိုက်ခွဲမွေးခြင်းဟာ အကြီးစား ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့အတွက် တခြား ခွဲစိတ်မှုများကဲ့သို့ လုံလောက်သော အနားယူမှု လိုကိုလိုအပ်ပါတယ် ။ ဗိုက်ခွဲမွေးဖွားပြီး နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာ တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက ဆေးရုံတွင် သုံးလေးရက်ခန့်နေပြီး အိမ်တွင် ခြောက်ပတ်လောက် အထိ အနာကျက်စေရန် အနားယူရပါမယ် ။
ဒါဟာ အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်ခက်ပါတယ် ။ သင်အလွန်ပင်ပန်းအနားယူချင်ပေမယ့် သင့်ဆီက နွေးထွေးမှု သင့်ရဲ့ ဂရုစိုက် နို့ချိုတိုက်ကျွေးမှုကို အမြဲတစေ တောင်းဆိုနေမယ့် ကလေးငယ်ကြောင့် မလွယ်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ကလေးအိပ်နေချိန်မှာ လိုက်အနားယူပါ ။ မိသားစုကို ကလေးသေးခံလဲခြင်းလိုမျိုးမှသည် တခြားဝေယျာဝစ္စအလုပ်တွေမယ် ကူညီစေပြီး ရနိုင်သလောက် အနားယူခြင်းဖြင့် အဆင်ပြေအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် ။
၂ ။ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ခြင်း
အနားယူစဉ် မိမိကိုယ်ကို အထူးဂရုစိုက်ပါ ။ လှေကား အဆင်းအတက်လုပ်ခြင်းများ တတ်နိုင်သရွေ့ ရှောင်ကျဉ်ပါ ။
ကလေးချီခြင်းမှ အပ တခြားအလေးအပင်ပစ္စည်းများ မခြင်း ရွှေ့ခြင်းများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ ။
နှာချေတိုင်း ချောင်းဆိုးတိုင်း ဗိုက်မှ ခွဲထားသည့်နေရာကို ဖိပေးပါ ။
လုံးဝ လူကောင်းပကတိအတိုင်းဖြစ်စေရန် ရှစ်ပတ်တာကာလအထိ အချိန်ယူရနိုင်သည့်အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း ၊ အလုပ်ခွင်ပြန်ဆင်းခြင်း ၊ ကားမောင်းခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် သင့်မသင့် ဆရာဝန်နှင့်ပြသတိုင်ပင်ရန် လိုအပ်ပါတယ် ။
ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကိုရှောင်ရှားသင့်ပြီး လမ်းလျှောက်ပေးခြင်းမျိုးသာ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ် ။ ထို့အပြင် ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ရေများများသောက်ပေးရန် လိုအပ်ပါတယ် ။
ခွဲစိတ်ဒဏ်ရာမှ နာသောအခါတွင်လဲ မိမိသဘောဖြင့် အနာသက်သာဆေးများ မသောက်သင့်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ဖြင့် တိုင်ပင်သင့်ပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် နို့တိုက် မိခင်များတွင် ရင်သွေးအား ထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့် မည်သည့်ဆေးမှ အလွယ်တကူ မသောက်သင့် မလိမ်းသင့်ဘဲ အထူးဂရုစိုက်သင့်ပါတယ် ။
၃ ။ အာဟာရမျှတအောင် စားသောက်ပေးခြင်း
လုံလောက်ပြီး မျှတသော အာဟာရဟာ ဗိုက်ခွဲမွေးပြီးစ မိခင်တစ်ဦးအတွက် အနာမြန်မြန် ကျက်ရန် ၊ ပုံမှန်အနေအထား အမြန်ဆုံးရောက်ရန် အဓိကအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
နို့တိုက်မိခင်တစ်ဦးအနေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အာဟာရများ အစားအစာများကို စားသုံးပေးမှသာလျှင်လဲ မိမိကလေးကျန်းမာ ဖွံ့ဖြိုးစေရန် အထောက်အကူရရှိစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ထို့အပြင် ရေ ၊ အရည်အမျိုးမျိုးကို အများအပြားသောက်ပေးခြင်းဟာ နို့ထွက်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။
ဘယ်အချိန် ဆရာဝန်ဆီ အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပြသ သင့်သလဲ ?
* ခွဲစိတ်ထားသော ချုပ်ရိုးတစ်လျှောက် နီရဲပြီး ယောင်ကိုင်းနေမယ် ၊ ပြည်တွေထွက်နေမယ်
* မိန်းမကိုယ်ကနေ အနံ့ဆိုးတွေနဲ့ အရည်တွေ ဆင်းမယ်
* ရင်ဘတ်အောင့် အသက်ရှူရခက်ခဲမယ်
အစရှိသည်တို့ ဖြစ်ပွားလျှင် ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပြသရန် လိုအပ်ပါတယ် ။